Warbaahinta Bandhiga Media oo aad kaga barateen warar sugan waxey todobaad walba idiin soo gudbin doontaa wararkii ugu waa weynaa ee dhacay Isbuuca, ee Ogaalka Bandhiga Media.
November 24, 2018: Madaxweyne Farmaajo ayaa kulan la qaatay dhigiisa Turkiga
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhiggiisa dalka Turkiga Mudane Rajab Dayib Ordogaan oo kulan gaar ah ku yeeshay magaalad Istanbuul ayaa ka wada hadlay sare u qaadista xiriirka labada dal, xoojinta iskaashig iyo wadajirka.
November 24, 2018: Shirkad Ganacsi oo dalka Pakistan laga leeyahay ayaa maalgashi ku sameynaya Soomaaliya
Safaarada Soomaaliya ay ku leedahay dalka Pakistan ayaa masuuliyiinta iyo shacabka dalkaasi ka dalbatay in Soomaaliya ay maalgashadaan waxaana durbadiiba hadalka kasoo yeeray safaarada u jawaab celiyay shirkad ganacsi oo dalkaasi caan ka ah.
Madaxweyne ku xigeenka Lahore Chamber of Commerce and Industry oo ah shirkad ganacsi oo caalami ah oo dalka Pakistan laga leeyahay Fahimur-Rehman Saigal ayaa warbaahinta u sheegay in ay ka go’antahay in Soomaaliya ay siyaabo farabadan u maalgashadaan ayna muhiim tahay in Pakistan markaani ay isku balaariso dalalka Afrika gaar ahaan kuwooda Islaamka ah.
November 24, 2018:: Gudoonka Golaha Shacabka ayaa raali gelin ka bixiyay warbixintii gudiga Maaliyada
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad oo kulanka shir Guddoominayay ayaa sheegay in guddoonka golaha ay soo gaartay Warqad ay ku saxiixan yihiin toban Xildhibaan oo ka mid ah Guddiga Maaliyadda, taasoo ujeedkeedu uu yahay tabasho ka dhan ah warbixin maaliyadeedka meelmarinta qoondada Miisaaniyada 2018-ka.
November 25, 2018: Akhriso: War-saxaafadeedka kulankii madaxda Uganda iyo Somaliya ee todobaadkan:
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa booqasho rasmi ah oo hal maalin ku tagay Jamhuuriyadda Uganda 24-kii Nofeembar, 2018, kadib markii uu martiqaad ka helay Mudane Yoweri Kaguta Museveni, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Uganda.
Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaa Qasriga Dowladda ee Entebbe ku qaabilay Mudane Madaxweyne Yoweri Kaguta Museveni.
Mudane Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu xaaladda Soomaaliya uga warbixiyey Mudane Madaxweyne Yoweri Kaguta Museveni. Waxa uu xusay in xaaladda amni ay si xoog leh uga soo raysay marka laga yimaaddo hawlgallada Alshabaab ee Koonfurta, khilaaf sokeeye oo marar dhaca, dacaayadaha aan salka laheyn iyo waxyaabaha kale ee nabadda carqaladeeya.
Wasiirka Warfaafinta XFS oo Xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Jaamacadda Carabta ee Soomaaliya
November 25, 2018: Dhowr musharax oo ka tanaasushay doorashada maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya:
Magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya oo la filayo in ay doorasho ka dhacdo waxaa is casishay Shan musharrax oo u taagnaa doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi in ay u tanaasuleen Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur.
Musharixiinta ka tanaasulay doorasahada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kala ah;
1- Maxamed Aadan fargeeti, wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya
2- Eng. Saalax Sheekh Cismaan, wasiirkii hore ee hawlaha guud iyo dib u dhiska Soomaaliya
3- Xasan Macallin, xildhibaan hore oo federaalka ah.
4- Yuusuf Baadiyow, xildhibaan hore oo federaalka ah
5- Musharrax Xuseen Kushuk
Dhammaantood waxay sheegeen in ay garab siin doonaan Mukhtaar Roobow sidii uu kursiga ugu guulaysan lahaa.
November 25, 2018: Wasiirka wasaradda Beeraha Soomaaliya & Safiirka jaamacadda Carabta oo ku kulmay muqdisho:
Wasiirka Wasaradda Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Soomaaliya, ku-xigeenkiisa iyo agaasimaha guud ee Wasaaradda ayaa kulan la yeeshay Safiirka Jaamacadda Carabta u fadhiya Soomaaliya Xamuud Bin Samraan Al-Xawiidi.
Waxa ay kawada hadleen wada shaqeynta labada dhinac, qorshe Dajinta shirka lagu wado in uu ka dhaco Masar ee looga hadlayo wax soo saarka Beeraha, deyn cafinta Soomaaliya ee Jaamacadda Carabta iyo hirgelinta Mashaariic.
Safiir Xamuud ayaa sheegay in ay ka go’an tahay gacansiinta Beeraleyda Soomaaliyeed, si loo kobcinta wax soo saarkooda uu u wanaagsanaado.
Doorka ugu banaan ka jaamacad carab ahaan ayuu sheegay safiirka in ay ka qaadan doonaan si dhiira-gelin ay u helaan Beeraleyda.
November 25, 2018: Maamulka Gobolka Banaadir ayaa si kulul ugu jawaabay warbixintii Guddiga Maaliyada Golaha Shacabka
Maamulka Gobolka Banaadir, isagoo ka falcelinaya qoraalka kasoo baxay shaqsiyaad ka mid ah Guddi Hoosaadka Maaliyadda BFS, oo lagu baahiyey warbaahinta iyo baraha bulshada.
Warka ka soobaxay Dowladda Hoose ee Xamar & Maamulka Goboka Banaadir ayaa lagu yiri: “waxuu ugu horeyn beeninayaa warbixintaas been abuurka aheyd oo si ku talagal ah u siyaasadeysneyd taasoo aan ka tarjumeynin xaqiiqada dhabta ah iyo horumarka baaxada leh ee uu Maamulku ka sameynayo nidaamka Maamulka iyo Maareynta Maaliyadda”
November 26, 2018: Ra’isul waasare Kheyre oo shir gudoomiyay kulan looga hadlayay amniga dalka:
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa guddoomiyay shir looga hadlayay dib u habaynta qorshayaasha amniga dalka iyo ku hoos shaqeynta tubta amniga iyo caddaaladda ee xukuumaddu u qorsheysay in dalka xasillooni lagula soo dabbaalo.
AKHRISO: Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyay shirka dhaqaalaha badda ee Nairobi
Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/llaahi Maxamed ((Farmaajo) , ayaa magaalada Nairobi uga qeybgalay Shirka Dhaqaalaha Badda, kaasoo ay goob joog ka ahaayeen Madax kala duwan..
Halkan Hoose ka aqriso Khudbadii Madaxweyne Farmaajo uu ka jeediyay SHirka:
Waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka noqdo shirkan koowaad ee ahmiyadda weyn leh, kuna saabsan dhaqaalaha badda ee lagu qabtay caasimadan quruxda badan ee Nairobi.
Marka hore, aan Madaxweyne Uhuru Kenyatta ku bogaadiyo qabanqaabada shirkan muhiimka ah ee ujeedkiisu yahay soo bandhigidda fursadaha tirada badan ee dhaqaalaha badda iyada oo haddana la dhawrayo biyaheenna si ay uga faa’idaystaan jiilasha soo socda mustaqbalka.
Soomaaliya waxaa suuragal u ah inay inta ugu badan ka faa’iddo dhaqaalaha badda ah si xooggan oo isla markaana waara.
Soomaaliya waa waddan leh muhiimad istaraatijiyadeed, waxayna leedahay xeeb dhererkeedu yahay in ka badan 3,300 km oo ah tan ugu dheer qaaradda Afrika, kana mid ah kuwa ugu wax soosaarka badan gobolka, fursad weyna u ah warshadaha iyo maalgashiyada la xiriira xeebaha.
Waxaannu leennahay kayd khayraad oo aan la taaban sida kalluunka, saliidda iyo gaaska badda, macdanta iyo khayraadka kale ee badda.
Maamulkaygu waxa uu garawsan yahay in khayraadkan baaxadda weyn ee aan weli la adeegsan ay wax badan ka beddelayaaan dhibaatooyinka saboolnimada, cunto la’aanta, biyo yaraanta, baahiyaha tamarta iyo caqabadaha shaqala’aanta.
Sidaasi darteed, waxaannu dejinaynaa istaraatijiyad ballaaran si aan uga faa’idaysanno dhaqaalaha badda ku salaysan, annaga oo dhawrayna deegaanka.
Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda ayaa ku hawlan sidii ay sameyn lahayd iskaashiyo lagu abuurayo, laguna horumarinayo dekedahayaga istaraatijiga ah, sare loogu qaadayo isu socodka gaadiidka badda, cuntada badda, beerashada badda, sifaynta biyaha badda iyo guud ahaan horumarinta macdanta badda. Wasaaradda Kalluumaysiga ayaa sidoo kale u xilsaaran horumarinta khayraadka badda.
Waxaannu si buuxda uga warqabnaa xiriirka ka dhexeeya nabadda, amniga iyo horumarka waara.
Muddadii dheerayd ee aan khilaafka ku jirnay ayaa shaki la’aan si taban u saamaysay koboca iyo horumarka khayraadka badda ee Soomaaliya.
Mar haddiiba aanu ka hadlayno abuuridda dhaqaale badda ah oo waara, iyo baahida loo qabo maalgashi iyo warshado, waxa lagama maarmaan ah inaanu marka kowaad ka hadalno dhaqdhaqaaqyada aan sharciga ahayn ee ka socda xeebaheenna.
Caqabadaha ugu badan ee saamaynta ku leh xeebta Soomaaliyeed waxa kamid ah maraakiib shisheeye oo si aan sharci ahayn uga kalluumaysta, ka ganacsiga dhuxusha aan sharciga ahayn iyo in qashin sun ah lagu soo daadiyo.
Waxaan rajaynayaa in qodobada ka soo baxaya shirkan uu qayb ka ahaadaan in la iska kaashado xakamaynta dhammaan hawlaha aan sharciga ahayn ee ka socda xeebaha.
Maamulkaygu waxa uu sii wadi doonaa inuu abuuro iskaashiyo caalami ah si loo xalliyo arrimahan.
Waxaan aaminsannahay in haddii la helo daahfurnaan iyo iskaashi sarreeya, lagana faa’idaysto horumarka dhanka teknaloojiyadda iyo awoodaha satalaytka, aynu awood u yeelan doonno hakinta dhaqdhaqaaqyadan.
Nabadda iyo amnigu waxay kamid yihiin ajendayaasha ugu muhiimsan ee maamulkayga.
Waxaan xoojinaynaa dowladnimada, sare u qaadaynaa iskaashiga dhinaca amniga si loo helo xasillooni, oo ay kamid tahay in la helo badweyn iyo xeebo nabad ah. Sidoo kale, waxaannu ka shaqaynaynaa inaan xoojinno adkaygsiga dadka si loo yareeyo saamaynta xun ee isbeddelka cimilada iyo abaaraha joogtada ah.
Dadaalladani waa ay bilawdeen, waxana durba muuqata in guulo laga gaaray.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan fursaddan uga faa’idaysanayaa inaan xuso in Soomaaliya ay diyaar u tahay iskaashiyada iyo maalgashiyada la xiriira khayraadka baddeenna hodonka ah.
November 26, 2018: Wasiirka difaaca Soomaaliya ayaa Midowga Yurub ka codsaday taageerista ciidamada dowladda.
Wasiirka Wasaaradda Gaashiindhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed (Amar dambe) oo Muqdisho kula kulmay Saraakiil ka socota Midowga Yurub ayaa kala hadlay taageerista Ciidamada Dowladda federalka.
Si gaar ah waxa uu ugu dalbaday in ay kordhiyaan tababarada Ciidamada Dowladda ay siiyaan Macalimiinta Midowga Yurub ee Muqdisho ku sugan, Dowladaha ururkaan ku jirana ay bixiyaan waxyaabaha fududeynaya.
Wasiir Amar Dambe ayaa intaa ku daray in kaalin muuqda uu ururka Midowga Yurub ka qaatay tababarada iyo dhismaha Ciidamada Dowladda Federaalka.
Ururka Midowga Yurub ayaa ciidamada Dowladda ku taageera tababarada iyo helista Qalabka ay ku howlgalaan Ciidamada.
November 26, 2018: Rw Khayre Oo La Kulmay Wafdi Ka Socda Golaha Amniga Iyo Nabadgelyada Midawga Afrika.
November 26, 2018: NUSOJ: Xukuumadda Ra’isul Wasaare kheyre waa xukuumaddii ugu qallafsanayd ee soomarta saxaafadda.
Xog-hayaha ururka suxufiyiinta qaranka Maxamed Ibraahim Macalimuu oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ururka suxufiyiinta qaranku uu aad uga walaacsan yahay sida xukuumaddu ula dhaqanto saxaafadda iyo shaqaalaheedii, waxa uu kahadlay xarigga suxufi lagu magacaabo Nuur Ismaciil Sheekh oo uu sheegay in loo dhaadhiciyey xabsiga dhexe iyada oo aan wax maxkamad ah la keenin, sidaas oo kalana loo diiday in ay qaraabadiisu arkaan, waxa uu sheegay in qoraaga iyo suxufiyiintaba loola dhaqmayo sida in ay gacan ku dhiiglayaal yihiin.
Macalimuu ayaa yiri: “Hab-dhaqanka xukuumadda hadda jirta ee uu raisalawasaaraha ka yahay raisalwasaare mudane Xasan Cali Kheyre, waxa aan dhihi karnaa waa muddo sanado badan waa xukuumaddii ugu qallafsanayd ee soo marta Saxaafadda Soomaaliyeed, waxa ay ula dhaqmaan saxaafadda hab adag, ma dabagalaan kuwa saxaafadda dhibaateeya”
Xukuumadda ayuu u jeeday eedo waaweyn o xasaasi ah, kuwaas oo ay kamid yihiin:-
In ay dhexgashay ururada saxaafadda oo ay kalaqaybisy
In ay saxaafadda u qaybisay kuwo ay cabburisay iyo kuwa ay laaluushtay, taas oo uu kusheegay in ay tahay mid gaar u ah xukuumadda Raisalwasaare Kheyre
November 27, 2018: Golaha Aqalka Sare ayaa soo gabagabeeyay Khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda:
Gudiga Golaha Aqalka Sare ee Dhex dhexaadinta Dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadda ayaa Ku dhawaaqay ay soo dhameeyeen dadaaladii lagu soo Afjaraayay Khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda.
Guddiga waxaa ay xukuumadda federaalka ah u soo-jeediyeen fulinta qodobada kor ku xusan, oo ah 8 qodob oo guud iyo 4 midba gooni u yahay maamul, oo ah nuxurka tabashooyinka.
November 27, 2018: Soomaaliya ayaa shir looga hadlayo Amniga kaga qeyb gashay Switzerland:
Wasiir ku-xiggeenka Wasaaradda Amniga gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane C/naasir Saciid Muuse ayaa ka qeyb galay Shir weyne guud oo looga hadlayo ka hor-tagga Miinooyinka iyo Walxaha Qarxa iyo siddii wax loogu qaban lahaa dadka Waxyeelada ay ka soo gaarto Qaraxyada.
Shirkaan oo ka socda Magaaladda Geneva ee dalka Switzerland ayaa waxaa ka qeyb galay marka laga soo tago Wafdiga Soomaaliya ka socda Madax kala duwan oo ka kala yimid Wadamada Caalamka.
Sidoo kale Shirkaasi ayaa waxaa ka qeyb galay Safiirka Dawladda Soomaaliya u fadhisa Dalka Switzerland Marwo Faadumo Insaani iyo Masuuliyiin kale oo Wafdiga Wasiir ku-xiggeenka Wasaaradda Amniga uu hoggaaminayo qeyb ka ah.
Shirkaan ayaa la filayaa in laga soo saaro Qodobo dhowr ah oo ku saabsan ka hor-tagga Miinooyinka iyo Walxaha Qarxa iyo siddii wax loogu qaban lahaa dadka Waxyeelada ay ka soo gaarto Qaraxyada.
Wafdi ka socda Midowga Afrika ayaa lagu soo dhaweeyey Baladweyne.
Magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta oo halkaa lagu soo dhaweeyey wafdi ka socda Midawga Afriga.
Wafdigaan waxaa horkacayey Wiilka gaarkaa ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliye Fransisco Madeira,waxaana garoonka Ugaas Khaliif ee Magaalada Baladweyne ku soo dhaweeyey madaxweynaha Madaxweynaha Hir-Shabeelle Waare iyo Gudoomiyaha gobolka Hiiraan.
Wafdigaan ka socda Midowga Afrika oo lagu soo dhaweeyey Baladweyne ayaa kulamo laqaadanaya Madaxweynaha Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare,Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan Yuusuf Daba-Geed iyo Saraakiisha Ciidamada qalabka sida,waxaana la isla soo qaadi doonaa xaalada abni ee Hir-shabeelle iyo howgaladii ugu dambeeyey.
November 28, 2018: Taliyaha ciidanka Mareykanka ee Afrika ayaa soo gaaray Muqdisho:
Taliyaha ugu sarreeya Ciidamada Mareykanka ee Afrika Jeneraal Gen. Thomas D. Waldhauser, ayaa soo gaaray Magaalada Muqdisho.
Taliyaha waxa Garoonka Aadan Cadde ku qaabilay danjiraha cusub ee Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya.
Markii uu soo gaaray Magaalada Muqdisho waxaa uu durbadiiba la kulmay Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Booqashada Gen. Thomas D. Waldhauser, ayuu ku sheegay in ay la xiriirto sidii loo taageeri lahaa dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in Dowladda Soomaaliya laga taageerayo wax uu ugu magaca daray D3s oo ah Difaaca, Diblomaasiyadda iyo Horumarka.
November 28, 2018: Doorashooyinka degaanada Somaliland ayaa dib loo dhigay:
Guddida doorashooyinka Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqay in ay dib u dhacday doorashadii baarlamaanka iyo goleyaasha degaanka oo la filayay in ay dhacdo 27-ka bisha March ee sannadka 2019ka.
Gudoomiyaha Guddigaasi ayaa warbaahinta u sheegay in doorashadda dib loo dhigay sababo badan owgood.
Guddiga, waxaa ma sheegin wakhtiga la qabanayo doorashada Somaliland.
Waxa ay sheegeen in doorashada golaha deegaanka la qaban doono wakhti kale oo aanan hadda la shaacin.
November 28, 2018: Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka ayaa la kala diray:
Guddoonka Golaha Shacabka ayaa kala diray Guddiga Miisaaniyada, Maalliyadda,Qorsheynta iyo La Xisaabtanka ee Golaha ayadoo Gudoonka uusoo dhisi doono guddi cusub.
Warqad uu ku saxiixnaa Gudoomiye ku xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa lagu sheegay in lagu kala diray dhammaan xubnihii Guddiga Maaliyada Soomaaliya ee Golaha Shacabka.
Sababta ayaa lagu sheegay in ay iskhilaafeen guddiga, islamarkaana ay noqdeen Labo dhinac, sidoo kalena Baarlamaanka Hortiisa ay keeneyn wax aan la aheyn Cadeymo.
November 28, 2018: Shirweynaha Qaranka ee Haweenka Soomaaliyeed ayaa Muqdisho lagu daah furay.
Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirweynaha Qaran ee haweenka Soomaaliyeed kaas oo la qabto sanadkiiba hal mar.
shirweynahaan ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka socday golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, qaar kamid ah xildhibaanada labbada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xubno haween ah oo ka socday maamul gobaleedyadda Dalka, xubno ka socday degaanada maamulka Somaliland, ardayda wax ka barta jaamacadda umadda iyo xubno ka socday gobalkaani Banaadir.
Shirka ayaa looga hadlayay qodobo dhowr ah oo ay kamid yihiin qaabka ay haweenka Soomaaliyeed ay uga qeyb qaadan karaan dib u heshisiinta, iyo doorka kaga aadan nabadeynta dalka.
Gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ahna gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka golaha aqalkaasi Senator Samsam Ibraahim Cali oo shirka daah furtay ayaa waxa ay sheegtay in laga doonayo haweenka Soomaaliyeed in wiilashooda ay ka wacyi geliyaan sidi ay kaga soo laaban lahaayeen ururada hubeysan ee ka dagaalama Soomaaliya.
November 28, 2018: Kenyatta:”Waxaan rabnaa in kalluunka Soomaaliya loo iib keeno Kenya”
November 29, 2018: Heshiiska shirkadda Favori ee garoonka Aadan Cadde oo dib u eegis lagu sameynayo:
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dib u eegis ku sameyneyso heshiiska sharikadda Favori ee maamusha Garoonka Aadan Cadde.
Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada Soomaaliya Maxaxamed Cabdullahi Salaad Oomaar, ayaa sheegay in heshiiska sharikadda uu dhacay sanadka soo socda ka hor inta aan la saxiixin mid kalena ay SOomaaliya dooneyso in dib u eegis lagu sameeyo.
Waxaa uu sheegay in qodobo ka mid ahaa heshiiska waqtigiisa dhamaaday aysan qaban Sharikadda Favori,waxaana ka mid ah dhismaha Terminalka 2aad ee Garoonka, Dukaamo laga dhiso banaanka hore ee Garoonka diyaaradaha iyo qodobo kale.
November 29, 2018: AMISOM ayaa diyaarineysa qorshihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya kaga baxeyso:
Taliyayaasha Ciidamada AMISOM ayaa lagu wadaa in kulan ku yeeshaan Magaalada Muqdisho ugana hadlaan qorshaha ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya.
Lixda Taliye Ciidan ee AMISOM oo kala ah, Ugadna, Itoobiya, Kenya, Jabuuti iyo Burundi ayaa berri ku kulmaya Magaalada Muqdisho waxaana ay dejinayaan wajiga ugu dambeeya ee qorshaha AMISOM kaga baxeyso Soomaaliya.
Arrintan waxa ay la dhalatay kaddib Guddiga nabadda iyo amaanka Midowga Afrika oo booqasha ku yimid Muqdisho sidoo kalena tagay xarumaha dowlad Goboleedyada.
Guddoomiyaha Wafdiga ka socday Midowga Afrika qeybtiisa Nabadda iyo amaanka waxaa hoggaaminayay Maxamed Idiriis oo ah Danjiraha Dowladda Jabuuti ee Itoobiya iyo Midowga Afrika.
November 29, 2018: Dastuurka dalka ayaa lagu kordhiyay luuqad kale oo Soomaali aheyn:
Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa Maanta oo Khamiis ah qabatay munaasabad lagu daah-furayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka Jaamacadda Carabta u fadhiya Soomaaliya.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Mudane Maxamed Abuukar Zubeyr ayaa ka warbixiyay hawshii soo qabsoontay ee la xiriirtay carabiyaynta Dastuurka KMG ah, isagoo ka qeybgalayaasha u soo bandhigay nuqul kamid ah Dastuurka KMG ah oo loo turjumay Afka Carabiga.